Daacishta Soomaaliya oo isaga Baxay Degmeda Qandala ee ay Shalay la Wareegeen
October 27, 2016 – Wararka inaga soo gaaraya Degmeda Qabdala ee gobolka Bari ayaa sheegay in xalay ay Xoogagii Ururka Daacish ee maalintii shalay la wareegay gacan ku haynta Degmadaasi ay isla xalay saq dhexe isaga baxeen Degmadaasi.
Ciidankaasi oo tiradoodu lagu qiyaasay illaa 50 dagaalyahan ayaa isaga baxay Degmada Qandala, kadib markii ay ka cabsadeen in Dagaal ay ku soo qaadaan ciidamada Puntland oo ka dhaw deegaanadaasi.
Markii dagaalyahanada Daacish ay qabsadeen Degmadaasi, ayaa waxay taasi baqdin xoogan ku dhalisay dadka deegaanka, kuwaa oo qaarkood ka cararay guryahooga, iyagoo ka baqdin qaba in lagu dul dagaalamo.
Sheekh C/qaadir Muumin Cali, oo ah Madaxa Ururka Daacishta ee Soomaaliya ayaa la sheegay inuu la socday ciidankaasi, waxaana shiikha lagu arkay gudaha Degmada Qandala, isagoona ka soo muuqday kulan ay Degmadaasi kula qaateen Odayaasha Dhaqanka Deegaanka.
Ciidamada Maamulka Puntland ayaa isla shalayba bilaabay dhaq dhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah dagaal-yahanada Daacish ee la wareegay gacan ku haynta degmedaasi Qandala.
October 27, 2016 tuugahaladilo2015
Puntland oo Soo Bandhigtay Dagaalyahano ka soo Goostay Ururka Daacish (SAWIRRO) June 21, 2017